हलचल मच्चिने गरि प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा माग ! « Etajakhabar
हलचल मच्चिने गरि प्रधानमन्त्री ओलीको राजिनामा माग !
प्रकाशित मिति : १६ असार २०७७, मंगलवार १७:२६
क्षामायाचना : प्रेस काउन्सिलवाट मिति २०७६, ०३, १९ गतेको पत्र प्राप्त भयो । सो पत्रमा इताजा खबरमा असार १६ गते प्रकाशित समाचार प्रति प्रेस काउन्सिलले चासो देखाएको छ । अहिले सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको राजिनामा पार्टी भित्रैका मुख्य नेतारुवाटै मागिएको छ ।
समाचार यो विषयमा केन्द्रित हो । हामीले मुख्य नेताहरुले प्रधानमन्त्री समक्ष राजिनामा मागेका कारण राजनीतिमा हलचल भन्ने अर्थमा समाचार पस्किन खोजेका हौं । तर त्यसमा राखिएको हेडलाइन्ले गलत अर्थ पर्न गएकोमा क्षमा चाहन्छौं । हाम्रो मनसाय सर्वसाधारणमा भ्रम छर्ने कदापी होइन । तर सानो असावधानीका कारण गलत अर्थ बुझिन गएकोमा क्षमा माग्दै आगामी दिनमा यस्ता गल्ती नदोहोर्याउने प्रण गर्दछौं । आगामी दिनमा पनि हामीलाई यस्तै सुझाव दिनुहुनुनेछ भन्ने अपेक्षा सहित धन्यवाद ।